မုတ်ဆိတ်ကိုပုံဖော်ခြင်း - အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
မုတ်ဆိတ်ကိုပုံဖော်ခြင်းသည်အမျိုးသားများကိုသတို့သားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မုတ်ဆိတ်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်၎င်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခုတွင်ဖက်ရှင်ကျနေပြီး ပို၍ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုလိုအပ်သည်။ စိတ်ကူးသည်ထိန်းချုပ်ထားသော၊ လူနေထူထပ်ပြီးကျန်းမာသောအသွင်အပြင်ကိုပေးရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်မုတ်ဆိတ်သည်အခြားသူများအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးထားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်တွင်မုတ်ဆိတ်မွေးရှိလျှင်၎င်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ Lမုတ်ဆိတ်ကောင်းသောသူသည်ကျန်းမာ။ သန့်ရှင်းသောအသွင်အပြင်ရှိရမည်။ သငျသညျအလှအပအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏လျှောက်လွှာကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပြီသတိထားမိကြောင်း။
ကျန်းမာ။ ဂရုစိုက်ရသည့်မုတ်ဆိတ်ကိုဖြေရှင်းရန်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်စောင့်ရှောက်မှုအားလုံးအပြင်သင်လုပ်ရမည် ၎င်း၏ဗေဒစံပြဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောင့်မှန်ကန်သောပရိုဖိုင်းကိုပေးပါ။ ထို့ကြောင့်အစီအစဉ်များချမှတ်ရာတွင်ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုသိရန်အဆင့်များစွာကိုသင်အဆိုပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အားလုံး၏ပထမခြေလှမ်းရရန်ဖြစ်သည် တစ် ဦး မုတ်ဆိတ်ရှိသည်နှင့်ဤအဘို့ငါတို့ကလိုချင်သောအရှည်ရောက်ရှိခွင့်ပြုရပေမည်။ အရာအားလုံးတစ်ခုချင်းစီ၏သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြရန်စတင်ရန်အချို့သောအရှည်ကိုသင်ရရန်လိုအပ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် သင်၏မုတ်ဆိတ်၏အထွေထွေဖွဲ့စည်းပုံကိုစတင်ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ ဤအတွက်သင်သည်ထိုဒီဇိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောပိုလျှံသောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသင်ရိတ်ရမည်။ သင် ... ရမည် သင်၏မုတ်ဆိတ်အစနှင့်လည်ပင်းကိုပိုင်းခြားထားသောမျဉ်းကြောင်းကိုဂရုတစိုက်နှင့်မှန်ကန်စွာပိုင်းခြားထားပါ။ ဤအပိုင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤခွဲခြာကိုကောင်းစွာမဖန်တီးပါကသင်သည်လည်ပင်းကောင်းကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏မုတ်ဆိတ်၏ဘေးကိုသင်၏နားသို့ကောင်းစွာကွေးရမည်, tiene que seguir una línea recta y curvada desde la parte posterior de tu oreja hacia toda la longitud de tu mandíbula hasta el mentón, que quede con buena simetría. En ဤဆောင်ပါး se explica con mucho más detalle.
အထူးသင်တုန်းနှင့်ဆံပင်ညှပ် အရှည်ကို fix နှင့်လိုချင်သောအရှည်ရ။ အရှည်ကို ၂ မီလီမီတာ၊ ၄ မီလီမီတာမှ ၆ မီလီမီတာအထိထိန်းချုပ်သောစက်များရှိသည်။ ထောက်ခံချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်အကွာအဝေးအဝေးမှသာပြုလုပ်ပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအတူတကွပြုလုပ်ထားသည့်တိုင်အောင်ဖြတ်သန်းမှုများစွာပြုလုပ်ရန်ပိုကောင်းသည်။
မှန်ရှေ့တွင်ရပ်။ သင့်ရဲ့နှာခေါင်းအလယ်ပိုင်းမှပါးတစ်ဖက်သို့ symmetry ကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ပါးပြင်အထက်ပိုင်းရှိပိုလျှံသောtoရိယာများတွင်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်လိုချင်သောပုံရိပ်ကိုရရှိသည်အထိသင်ဓါးသွားကိုဆံပင်၏ညှနျကွားနှငျ့ဆံပင်ကိုလဲလှဲရမညျ။
သင် pin ရဲ့မျဉ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ရမယ်၊ အကြံကနားကနေနားအထိသွားတဲ့ကွေးတဲ့မျဉ်းကြောင်းကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။ ဗိမာန်တော်နှင့်နားကြားရှိဖြောင့်မတ်သောဖြတ်တောက်မှုကိုပြုလုပ်ရမည်။
တိကျစွာချုံ့စက်ဖြင့်သင်လုပ်ရမည် အားလုံးသတ်မှတ်ထားသောinရိယာ၌သင်တို့၏မုတ်ဆိတ်ပုံသဏ္ာန်ပေးပါလည်ပင်းandရိယာနှင့်ပါးနှင့်ပါးစပ်ကြားရှိအကြား၊ မျက်စိမှချောမွေ့စေရန် rounding ။
ဈေးကွက်ထဲမှာတစ် ဦး ရှိ၏ ဆံပင်ညှပ်များသို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်ချည်ထည်များဟုခေါ်သောစက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အကယ်၍ လမ်းညွှန်ဖြီးကိုသင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါကသင့်တော်သောတစ်ဝက်လျောက်ပတ်သောပုံဖော်စက်ကိုရနိုင်ပြီးသေးငယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်တိကျသောဖြတ်တောက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
တစ်ခါတည်းဓါးသွား ၎င်းတို့သည်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းနှင့်ပုံသဏ္forာန်ချခြင်းအတွက်လည်းအသုံးဝင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကိုင်တွယ်ရန်အနည်းငယ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးတိကျမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မကူညီနိုင်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်ပါကစာရွက်တစ်ရွက်တည်းဖြင့်သာ အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည်။
တစ် ဦး မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကိုသုံးပါ သင်၏မုတ်ဆိတ်ပတ်လည်အတိုင်းအတာကိုမှတ်သားရန်အလွန်တိကျသောဓါးသွားလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရလဒ်သည်စံနမူနာယူစရာမဖြစ်သော်လည်းသင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်မမြင်ရသောမတော်တဆမှုတစ်ခုထက်ပိုသောကြောင့်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်အကြံပြုလိုသည်။
မုတ်ဆိတ်ကိုဖယ်ရှား။ ရိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးချနိုင်သည် ရေမြှုပ်သို့မဟုတ်ဂျယ်လ်ရိတ်။ သို့သော်၊ ဤထုတ်ကုန်များကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုပြီးကောင်းမွန်သောandရိယာကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ရိတ်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်သာမှုပြwithနာနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။
အရောင်တွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ရှာတဲ့ဂျယ်တွေရှိတယ် ဒါကြောင့်သင်ကဓါးသွားတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။ သင်တို့သည်လည်းaကိုသုံးနိုင်သည် မုတ်ဆိတ်များအတွက်အထူးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ။ ၎င်းရေနံသည်ချောဆီတစ်မျိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးသင်၏အရေပြားပေါ်တွင်လုံးဝထိုးဖောက်ခြင်းမရှိချေ။
သင်ရွေးချယ်ချင်လျှင် မုန့်ဆပ်ပြာ brush ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းသည်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ရလဒ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်းကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။
သင်၏မုတ်ဆိတ်ကိုချုံ့ပြီးနောက်သင်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆပ်ပြာဖြင့်သန့်စင်ပြီးအေးစက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အထူးမုတ်ဆိတ်ဆီလျှောက်ထားပါ ဆံပင်မွှေးကိုအာဟာရဖြည့်ပေးပြီးယားယံခြင်းကိုလျှော့ချပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » အဆိုပါမုတ်ဆိတ်ပုံဖော်